काठमाडौं, कात्तिक ५ । नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराई अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । बिगत केहि दिनदेखि उच्च ज्वरोको कारण घरमै आराम गरिरहेका भट्टराई शुक्रबार वीर अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको हो । ज्वरो बढेपछि अस्पताल भर्ना गरिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
हेटौंडा : नेकपा एमालेको सचिव योगेश भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेस इतिहास बोकेको तर भविष्य नभएको पार्टी रहेको बताएका छन्।बिहीबार हेटौंडामा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले काङ्ग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी भए पनि भविष्य भने नभएको टिप्पणी गरेका हुन्।एमालेको विषयमा टीका टिप्पणी गर्ने काङ्ग्रेसमा वैचारिक बहस नभएको उनले बताए। भट्टराईले एमालेले आफ्नो विचारलाई ओझेल पर्न नदिन विधान अधिवेशन गरेको भन्दै काङ्ग्रेसले महाधिवेशनमा पेस गर्ने वैचारिक प्रतिवेदन के बनाएको छ भन्दै प्रश्न
योगेश भट्टराई माधव नेपालविरुद्ध यसकारण आक्रामक
काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेकपा एमालेमा विगतमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेकामध्ये योगेश भट्टराई मात्र त्यस्ता नेता हुन् जसले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले प्रचार विभागको जिम्मेवारी पाएसागै १०औं महाधिवेशन पूर्व सार्वजनिक रुपमा बोल्न थालेका छन् । भट्टराईले माधवकुमार नेपालविरुद्ध समेत आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् । जसमध्ये एउटामा उनले नेकपा एसको नाम नलिई माधव नेपालको […]
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराई अस्पताल भर्ना भएका छन् । एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका भट्टराईलाई विगत तीन दिनदेखि आएको ज्वरो नघटेपछि अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको हो । ज्वरो आएपछि केही दिन घरमै बसेर सामान्य उपचार गरेका भट्टराईले ज्वरो कम नभएपछि शुक्रवार दिउँसो वीर अस्पतालमा भर्ना गरेको स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईंले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ – एमाले सचिव एवं पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई अस्पताल भर्ना भएका छन्। केही दिनदेखि ज्वरोले थलिएका भट्टराई शुक्रबार दिउँसो वीर अस्पताल भर्ना भएको उनका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईंले जानकारी दिए। गुरागाईंका अनुसार घरमै उपचार गदौ निको नभए पनि भट्टराईलाई अस्पताल पु¥याइएको हो। उनलाई सात दिनसम्म अस्पतालमै राख्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकले दिएका छन्। उपचार अवधिमा सबै खालका […]
फागुन २८ को निर्णय फिर्ता भएन भने एमाले सग्लो रहँदैनः योगेश भट्टराई
योगेश भट्टराई सवार गाडीले रौतहटमा साइकलयात्रीलाई दियो ठक्कर
काठमाडौं । प्रचण्ड-नेपाल समुहका नेता एवम् पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई सवार गाडीले ठक्कर दिँदा एक साइकल यात्री घाइते भएको छन् । आइतबार जनकपुरबाट हेटौडातर्फ आउदै गर्दा रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा नेता भट्टराई सवार ज १ झ ४२७ नम्बरको गाडिले ५५ वर्षीय इन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई ठक्कर दिएको रौतहट प्रहरीले जानकारी दिएको छ । करिब ७ बजेतिर साईकलमा सवार रहेका घिमिरेलाई... The post योगेश भट्टराई सवार गाडीले रौतहटमा साइकलयात्रीलाई दियो ठक्कर appeared first on Purbeli News.
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई चढेको गाडीले साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिएको छ । रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा भट्टराई चढेको गाडीले ठक्कर दिँदा ५५ वर्षीय इन्द्रपसाद घिमिरे घाइते भएका छन् । उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सिद्धिबिक्रम शाहले रातोपाटीलाई बताए । उपचारमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता योगेश भट्टरार्ईले चासो देखाएका छन् । प्रदेश–२ सरकार जनकपुरको ज.१ झ ४२७ नम्बरको सो गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ‘गाडी चालक